Ny lalana ve raha atao tsara, asiana feu rouge, amboarina ny lalana manokana taxi, taxi-be, moto sy bisikileta, ny an'ny mpandeha tongotra, dia tsy ho vitan'io 600 miliara ariary ariana io ?
200 km fotsiny ny lalana rehetra eto Antananarivo, 30 % n'ny viditsolika no hetra.
Solika lanin'Antananarivo 23 000m3 isam-bolana, raha heverina ny antsasak'io no lanin'Antananarivo renivohitra dia 10 millions litre isam-bolana, raha1000 ariary isaky ny litatra ny hetra dia 10 miliara ariary isam-bolana ny vola azo amin'ny solika. 60 miliara ariary hetra 6 volana. 300 millions ariary na 1.5 miliara fmg isaky ny km, no azo avy amin'ny solika dia vita ny lalana, tsy mila mpamatsy vola izany.
Tadidio izany fa isaky ny mividy solika 1 litre ianao dia 1000 ariary amin'iny tokony nanamboaran-dalana andehananao. Tsy maimaim-poana izany ny fampiasanao io lalana io fa efa nandoavanao sarany, izay tsy natao akory, io ilay tokony hiditra amin'ilay kitapom-bola hoe FER na Fond d'Entretien Routier.